Permalink to %s	 %s သို့ အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ	 Details
%s သို့ အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ
This entry was posted in %1$s. Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.	 ဒီအေြကာင်းအရာကို %1$s တွင် ေရးသားခဲ့သည်။ <a href="%3$s" title="%4$s ချိတ်ဆက်လိပ်စာ" rel="bookmark">အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ</a> ကို စာအုပ်မှတ်ြပုလုပ်ထည့်သွင်းပါ။	 Details
ဒီအေြကာင်းအရာကို %1$s တွင် ေရးသားခဲ့သည်။ <a href="%3$s" title="%4$s ချိတ်ဆက်လိပ်စာ" rel="bookmark">အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ</a> ကို စာအုပ်မှတ်ြပုလုပ်ထည့်သွင်းပါ။
This entry was posted in %1$s and tagged %2$s. Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.	 ဒီအေြကာင်းအရာကို %1$s တွင် ေရးသားခဲ့ြပီး %2$s ြဖင့် စကားစုတွဲချိတ်ထားသည်။ <a href="%3$s" title="%4$s ချိတ်ဆက်လိပ်စာ" rel="bookmark">အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ</a> ကို စာအုပ်မှတ်ြပုလုပ်ထည့်သွင်းပါ။	 Details
ဒီအေြကာင်းအရာကို %1$s တွင် ေရးသားခဲ့ြပီး %2$s ြဖင့် စကားစုတွဲချိတ်ထားသည်။ <a href="%3$s" title="%4$s ချိတ်ဆက်လိပ်စာ" rel="bookmark">အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ</a> ကို စာအုပ်မှတ်ြပုလုပ်ထည့်သွင်းပါ။
Bookmark the <a href="%3$s" title="Permalink to %4$s" rel="bookmark">permalink</a>.	 <a href="%3$s" title="%4$s သို့ အြမဲချိတ်ဆက် လိပ်စာ" rel="bookmark">အြမဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ</a>ကို စာအုပ်မှတ်ြပုလုပ်ပါ။	 Details
2014-09-05 08:59:38 GMT
%1$s at %2$s	 %1$s ရက်ေန့ %2$s Details
%1$s ရက်ေန့ %2$s
2014-06-01 14:23:26 GMT